100% Polyester filaments High Tenacity mpandefa mpamatsy
High Tenacity 100% Polyester Filamet mahalika
Ny kofehy manjaitra avo lenta an'ny polyester, fantatra ihany koa amin'ny hoe Tedron thread, dia kofehy manjaitra vita amin'ny filament polyester avo lenta sy mihena amin'ny alàlan'ny fampifangaroana, fanodikodinana ary fomba hafa. Izy io dia manana tanjaka avo, fandokoana matanjaka, fanoherana tsara fitafiana, fampisehoana tsara, toy ny harafesina sy ny ahitra, tsy misy tonon-taolana sns.
Amin'ny fizotry ny famokarana rehefa mamaly ny fiovan'ny fihenjanana dia miorina tsara izy io, ka mampihena ny vaky kofehy sy ny fanoloana kofehy mandritra ny fanjairana, izay mahomby amin'ny fanatsarana ny famokarana ary tena mety amin'ny fanjairana kiraro sokajy, akanjo matihanina, fitaovana matihanina, fanaka vita amin'ny hoditra kojakoja vita amin'ny hoditra.
Spec:Ny fanombohana ankapobeny dia manana 210D / 2, 210D / 3, 300D / 3, 420D / 3, 630D / 3 sy ny sisa.
Fa maninona no misafidy MH Polyester manjaitra kofehy manjaitra?
Ny tanjaky ny fanapahana avo kokoa sy ny toetra mampiavaka azy dia mamokatra seams manintona sy tsara amin'ny kiraro vita amin'ny hoditra sy ny entana vita amin'ny hoditra.
Ny famaranana malefaka amin'ny alàlan'ny fanosorana ambany ambany dia mampihena ny vokatry ny hafanana amin'ny fanjaitra sy ny fanala Izy io dia manana endrika stitch tsy miova sy endrika bika madio.
Kofehy polyester 840D / 3 ho an'ny hoditra
300D / 3 100% Polyester High Tenacity
210D / 6 lakolosy fanjaitra mitafo tokana 200G
210D / 2 lakolosy fanjaitra mitafo tokana 200G
420D / 3 Threade tapa-mitaingina Polyester Tenacity
210D / 3 100% Threading mpanjaitra polyester
60D / 2 100% Lozom-baravarana manjaobato Polyester 250G
250D / 3 100% Polyester High Tenacity